တရုတ် PP PE ရုပ်ရှင်ကို ဖြုန်းတီးနေသော Agglomerator ဖြင့် ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် Extruder စက် ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |PuRui
ထောင့်ဘုတ်ပလပ်စတစ် extrus ...
PP Jumbo အိတ် ဖျက်ချခြင်း Crus...
SJ အမျိုးအစား ကြိတ်စက်...
ဖျက်ချခြင်း Agglomerator ဖြင့် PP PE ရုပ်ရှင်ပြန်လည်အသုံးပြုသည့် Extruder စက်
Belt conveyor သည် ဖြုန်းတီးနေသော compactor ဖြင့် အပြန်အလှန်သော့ကို ရယူသည်။ကြိတ်စက်အတွင်းပိုင်း အပူချိန် မြင့်လာကာ ၎င်း၏ အမ်ပါရီသည် အလွန်များလာသည်နှင့် အမျှ ခါးပတ် conveyor သည် အလိုအလျောက် ရပ်တန့်သွားပါသည်။
အရည်ကျိုထားသော compactor ကိုရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းအစာကျွေးသည့်အရှိန်ကို စောင့်ကြည့်နိုင်သည့် Compactor cutter valveထိုဒီဇိုင်းသည် ဟန်ချက်ညီစေရန်အတွက် များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။
ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စွန့်ထုတ်နိုင်သော နှစ်ထပ်ဖုန်စုပ်စုပ်စနစ်။
အမျိုးမျိုးသော ဟိုက်ဒရောလစ်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်သည် ညစ်ညမ်းမှုများအတွက် ကြီးမားသော စစ်ထုတ်ခြင်းမျက်နှာပြင်ကို သေချာစေသည်။တည်ငြိမ်သောဖိအားနှင့် လျင်မြန်သောမျက်နှာပြင်ပြောင်းလဲခြင်းအမြန်နှုန်း။
HDPE၊ LDPE၊ LLDPE၊ PP အစရှိသော ရုပ်ရှင်များ၊ အိတ်များ၊ အပေါက်များ၊ ဖလင်ကြိတ်စက်များ၊ ဆန့်ဖလင်၊ ကျုံ့ရုပ်ရှင်၊ အလွှာပေါင်းစုံ ဖလင်၊ တီရှပ်အိတ် ဖြတ်တောက်မှုများ၊
အမြှုပ်ထွက်သော PE၊ EPS နှင့် XPS- လိပ်များ၊ အိတ်၊ စာရွက်၊ အစားအသောက်ပုံး၊ သစ်သီးကျော့၊ အဖုံး
အထည်အလိပ်- PP ဖိုင်ဘာ၊ raffia၊ ပိုး၊ ချည်၊ ယက်အိတ်၊ ဂျမ်ဘိုအိတ်
ဤကြိတ်စက်သည် ပေါင်းစည်းထားသော အမှုန့်ချေခြင်းစနစ်သည် ကြိုတင်ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုဘဲ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်းကို အကျိုးပြုသည်။
ပစ္စည်းအစာကျွေးနှုန်းကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် ဖြတ်တောက်မှုအဆို့ရှင်များ တပ်ဆင်ပေးပါသည်။
ရေ သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထုတ်ပေးသည့် ဖုန်စုပ်စနစ်
မရပ်မနား၊ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရန် တည်ငြိမ်သောဖိအားဖြင့် အထူးကောင်းမွန်သော ဟိုက်ဒရောလစ်စခရင်ဖလော်ထုတ်ပါ။
မြင့်မားသောအထွက် (0.28kwh/kg) ဖြင့် ပါဝါချွေတာသည်။
1.Belt conveyor မှ ပစ္စည်းကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး compactor သို့ လွှဲပြောင်းပါ။
2. ခါးပတ်သို့ သယ်ယူပို့လွှတ်ခြင်းနှင့် ကြိတ်ခွဲခြင်းကြား အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် အရည်ကျိုကျစ်လျစ်ခြင်းမရှိဘဲ ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းညှိပေးသည်။
3. ကြိတ်ခွဲစက်၏အောက်ခြေတွင်၊ ခုတ်ထစ်ဘုတ်တစ်ခုရှိသည်။ဗဟိုမှ တွန်းအားဖြင့်၊ ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်းကို ရိုတာရီဖြတ်စက်များနှင့် စာရေးကိရိယာများအတွင်းမှ ကြိုတင်ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။
4.ထို့နောက်၊ ပစ္စည်းသည် compactor ၏ဘေးဘက်ရှိ degassing screw သို့ရောက်သွားသည်။
5.ဝက်အူအပူပေးခြင်းဖြင့် ပလပ်စတစ်သည် semi-plastification ပစ္စည်းဖြစ်လာသည်။
6.ထို့နောက်၊ ပလတ်စတစ်တစ်ပိုင်းပစ္စည်းကို အလုံးများအဖြစ်သို့ လှီးဖြတ်ပါ။
မော်ဒယ် ML75B ML85B ML100B ML130B ML160B ML180B
ဝက်အူအချင်း(မီလီမီတာ) 75 85 ၁၀၀ ၁၃၀ ၁၆၀ ၁၈၀
L/D ၂၆ မှ ၃၇
အထွက်(ကီလိုဂရမ်/နာရီ) ၁၀၀-၁၅၀ ၂၀၀-၃၅၀ ၄၀၀ မှ ၅၅၀ ၆၀၀ မှ ၈၀၀ 800 မှ 1000 ၁၀၀၀-၁၂၀၀
အထွက် ပလပ်စတစ်အလုံးများ/ granules/ resins/ ပလပ်စတစ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ
စက်အစိတ်အပိုင်းများ Belt conveyor၊ cutter compactor, main extruder, pelletizing unit, cooling system, silo, cabinet
ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်း PP/PE/LDPE/HDPE ရုပ်ရှင်၊ အိတ်၊ ဖိုက်ဘာ
စွမ်းရည်အပိုင်းအခြား 100kg/h မှ 1200kg/h
အစာကျွေးနည်း Conveyor, roll မောင်းနှင်စနစ်
ဝက်အူချင်း 75mm မှ 200mm
ဝက်အူ L/D ၂၆ မှ ၃၃
ဝက်အူကုန်ကြမ်း 38CrMoAl သို့မဟုတ် bimetallic
degassing သဘာဝအတိုင်း ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ ဖုန်စုပ်စုပ်ခြင်း
ဖြတ်တောက်ခြင်းအမျိုးအစား ဒေါင်လိုက် pelletizing နည်းလမ်း၊ ဆွဲနုတ် pelletizing
အအေးခံအမျိုးအစား ရေအေး၊ လေအေး
ရွေးချယ်နိုင်သော စက်များ သတ္တုရှာဖွေစက်၊ ရေအအေးပေးစနစ်၊ အစာကျွေးသည့် silo၊ တုန်ခါမှုစနစ်
ပို့ဆောင်ချိန် 40 မှ 60 ရက်
အာမခံအချိန် ၁၃ လ
နည်းပညာပံ့ပိုးမှုများ စက်အပြင်အဆင်၊ တပ်ဆင်မှုအပြင်အဆင်၊ အင်ဂျင်နီယာ ပြည်ပဝန်ဆောင်မှု
လက်မှတ် CE / SGS / TUV / CO
A.PURUI တွင် 2006 ခုနှစ်ကတည်းက ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူ ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာဒီဇိုင်းဌာနရှိသည်။extruder တစ်ခုစီသည် ပစ္စည်းအင်္ဂါရပ်အရ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
B. အထွက်နှုန်းမြင့်မားစွာဖြင့် ပါဝါချွေတာခြင်း။
C.Quality အာမခံအချိန်သည် Bill of Lading date မှ 12 လဖြစ်သည်။
D.Delivery အချိန်: အလုပ်ရက် 40 မှ 60 ရက်
E.Ship တောင်းဆိုထားသော အထုပ်
F.Machine တပ်ဆင်မှုကို သင်္ဘောပေါ်တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။တပ်ဆင်မှုတစ်ကြိမ်ပြီးမြောက်ရန်5ရက်မှ7ရက်ခန့်ကြာပါသည်။တာဝန်ပေးအပ်ထားသော အင်ဂျင်နီယာ(များ)သည် စက်အသုံးပြုသူသင်တန်း၊ စက်လည်ပတ်မှုနှင့် ကော်မရှင်ကို စီမံခန့်ခွဲသည်။
Chengdu PuRui Polymer Engineering Co. Ltd သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပလပ်စတစ်ပြန်လည်အသုံးပြုစက်များ၊ extruder၊ ပလပ်စတစ် granulator နှင့် ဆက်စပ်အရန်ပစ္စည်းများ၏ ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ပလပ်စတစ်အမှုန့်ကြိတ်ခြင်းစနစ်၏ထူးခြားသောအားသာချက်များမှာ ဝက်အူဒီဇိုင်း၊ အထွက်နှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ ကောင်းမွန်စွာဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ကောင်းမွန်သော filter effect တို့ဖြစ်သည်။ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကြိတ်စက်နှင့် ချွန်ထက်သော ဖြတ်စက်၊ အဝတ်လျှော်စက်၊ ခွဲထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် စီခြင်းစက်၊ အခြောက်ခံစနစ်နှင့် ထုပ်ပိုးမှုစနစ်ကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ပလပ်စတစ်အဝတ်လျှော်လိုင်းများသည် အသံအရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပါသည်။
ယခင်- PVC ပိုက်လုပ်စက်
နောက်တစ်ခု: စက်ရုံမှ 18 နှစ်ကြာတရုတ်နိုင်ငံမှပြန်လည်အသုံးပြုသည့်စက် ကတ်ထူပြားဖျက်စက်၊ ပလပ်စတစ်စက္ကူဖြတ်တောက်ခြင်းစက် Cross Cut Textile Shredder
PET flake granulation စက်